विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको सुमधुर सम्बन्धबाट नै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ : अम्बिका आचार्य - Radio Bihani
विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको सुमधुर सम्बन्धबाट नै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ : अम्बिका आचार्य
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०८:४२
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धादिङमा भर्खरै प्रमुख भएर आउनु भएका तनहुँ निवासी अम्बिका प्रसाद आचार्यसँग जिल्लाको समग्र शिक्षाको अवस्था, जिल्लामा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन के कस्ता कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ? हालसम्मको अनुभव के कस्तो रहेको छ ? भन्ने विषयमा रेडियो विहानी ९७.६ मेगाहर्जको लोकप्रिय कार्यक्रम विहानी संवादमा प्रस्तोता सञ्जय देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानी ।
तपाईँ लामो समय शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभयो ? यसरी शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आउँदा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
उदयपुर, चितवन, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्ज्या, तनहूँ, कास्की, रुपन्देही, दैलेख हुँदै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय साविकको पोखरा र त्यसपछि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय गरेर जहाँ जहाँ बसियो त्यहा जाने र सकेजति काम गरियो । विभिन्न जिल्लाहरुमा हुँदा टिमका साथ सबै मिलेर निश्चित कार्यक्रम राखेर निश्चित कामहरु गरियो । गोरखामा रहेको शैक्षिक समस्या दरवन्दी मिलान ग¥यौँ । त्यस्तै धेरै लामो समयदेखि जकडिएर रहेको विद्यालयहरुमा विद्यार्थी हुने तर शिक्षक नहुने शिक्षकहरु धेरै सहर केन्द्रित हिसाबले बस्ने परिपाटी लमजुङमा थियो । सबै सहर केन्द्रित शिक्षकलाई गाउँ केन्द्रित गराई दरबन्दी मिलान गर्ने प्रकृया ग¥यौँ । दैलेखमा जाँदा परीक्षाको अवस्था नाजुक रहेको देखियो । तत्कालीन एस.एल.सि. परीक्षाको अवस्था ज्यादै नै नाजुक थियो । त्यसलाई सुधार्न धेरै जमर्को गर्नुप¥यो । सायद अहिले त्यो अवस्था स्मरणीय छ जस्तो लाग्छ । रुपन्देहीमा बस्दै गर्दा सामुदायिक र संस्थागत बिद्यालयबीच ठुलो द्धन्द्ध रहेको देखियो । विद्यार्थीहरु पनि एक ठाउँमा पढ्दै गर्दा अर्को ठाउँमा जाने जस्ता परिपाटी देखियो । जसलाई हामीले समन्वय गरेर मिलाउने जमर्को गरेका थियौँ । स्याङ्जामा हामीले विद्यार्थीको नजरमा शिक्षक भन्ने वक्तृत्वकला प्रतियोगिता गरायौँ । यसरी विभिन्न जिल्लाहरुमा काम गर्दै गर्दा विभिन्न समस्यामा आधारित रहेर काम ग¥यौँ ।
धादिङ जिल्लाको शिक्षा प्रणाली हेर्दा सुधार गर्न त खोजिएको हो तर जति उपलब्धी हासिल हुन पथ्र्यो त्यो भएको पाइदैन । तपाईँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धादिङको प्रमुखको हैसियतले जिल्लामा सुरु गरिहाल्नुपर्ने कामहरु के के हुन् ?
हाम्रो जिम्मेवारी दायित्व भनेको सबै गाउँ पालिकाका शिक्षा प्रमुख तथा शाखा प्रमुखसँग समन्वय गरी शैक्षिक सुधारको लागि के कस्तो काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कहिले काही सबै गाउँ पालिका, नगरपालिकाका प्रमुख तथा शिक्षा प्रमुख सबैसँग बसेर शैक्षिक सुधारका लागि लागिपर्न सकियो भने धादिङको शैक्षिक अवस्था सुधार्न सकिन्छ। विगत तथा हाल राम्रा भनिएका विद्यालयहरुले सबै निकाय, विद्यार्थी अभिभावकसँग समन्वय गरेर अघि बढेकाले राम्रो विद्यालयको रुपमा चिनिएका हुन् । हामीले बढी विद्यार्थीलाई दोष दिने गर्छौँ तर उसले घरमा के गर्छ ? उसको घरमा पढ्ने बानी कस्तो छ ? के कारणले गर्दा उसले सोचेको जस्तो पढ्न र गृहकार्य गर्न सकेको छैन ? भन्ने कारण हामीले खोज्यौँ भने विद्यार्थीको पढाइमा सुधार गर्न सकिन्छ । प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुले पनि कसरी पढाउने विद्यार्थीलाई के गर्दा पढाइप्रति ध्यान केन्द्र्रित गर्न सकिन्छ ? त्यही अनुरुप पढाउने हो भने शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । विद्यालय बनाउने तथा स्थापना गर्नेलाई जति माया लाग्छ त्यहाँ काम गर्नेलाई त्यति माया नलाग्न सक्छ । त्यसैले शिक्षकहरुमै पनि एउटाको संयोजकत्वमा शिक्षा समिति गठन गरौँ । हाम्रा विद्यार्थीहरुमा संस्कार, संस्कृति बिग्रिएको छ । विद्यार्थीहरु पढ्ने समयमा त्यतिकै बरालिएर हिडेको पाइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सम्झाएर पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ साथै टोल शिक्षा समितिको गठन पनि गर्नुपर्छ । ५ वा ७ कति सकिन्छ समिति बनाएर शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ । खास गरेर परीक्षाका बेलामा विद्यार्थीहरुले कतिको पढेका छन् ? विद्यालय गएका छन् कि छैनन् ? भन्ने कुरा निरीक्षण गर्नुपर्छ र घरदैलो कार्यक्रमको पनि अत्यन्तै आवश्यकता छ । राम्रादेखि मध्यम स्तरका विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई हुने गरी बुदाँहरु तयार गर्ने जुन सबै विद्यालयमा लागु होस् । कमजोर विद्यार्थीहरुलाई छुट्टै कक्षाको सञ्चालन गरेर हो कि उनीहरुको अभिभावकलाई सम्झाएर हुन्छ अथवा विद्यार्थीहरुलाई ट्युसन कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आइ.सि. टि को प्रयोग गर्ने जस्तै मोबाइल वेबसाइटहरु हेर्ने शिक्षा सम्बन्धी इमेल इन्टरनेटहरुबाट शिक्षाका विषयमा खोजी गर्ने गरी एउटा शिक्षक डायरी मोबाइलकै मार्फत तयार गर्ने गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई दोष दिने हाम्रो परिपाटी छ । शिक्षकले चाह्यो भने सबै कुरा हुन्छ भन्ने धारणा गलत छ । तर शिक्षकमा भएको प्रतिभाहरुलाई उजागर गर्न शिक्षक महोत्सव सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । तथापि बजेटले कति साथ दिन्छ थाहा छैन । विगतमा गणित विषयलाई गाह्रो विषयको रुपमा लिइन्थ्यो तर अहिले गीतको माध्यमबाट पनि सुत्रहरु आउन थालेका छन् । ह्रस्व, दीर्घ एकदमै कठिन भन्ने मानिन्थ्यो तर उहाँहरुको तमाम प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने हिसाबले सबै पालिकाका अब्बल भनिएका शिक्षकहरुलाई बोलाएर तालिम आयोजना गर्ने गर्नुपर्छ । साथै विद्यालय विद्यालयमा हप्ता हप्तामा शैक्षिक सामग्री सप्ताहको रुपमा मनाइनु पर्छ । म विद्यार्थीको लागि र विद्यार्थी मेरा लागि भन्ने मूल मन्त्रका साथ अगाडि बढ्यौँ भने शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ ।
सरकारी र नीजि विद्यालयमा अझै पनि धेरै फरक छ । सरकारी विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षक छन् । प्रशस्त दरबन्दी छ । साधन स्रोतका हिसाबले पनि पूर्ण छन् । तर पनि नतिजा संस्थागत विद्यालयकै राम्रो देखिन्छ । कसरी ?
यसमा शिक्षकहरुलाई मात्र दोष नदिउँ । शिक्षकलाई राम्रो र नराम्रो देख्ने सबै हाम्रो मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो । समाजले शिक्षालाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अङ्ग्रेजी जान्दैमा शिक्षामा सुधार हुने कुरा गलत हो । बोर्डिङमा उत्पादन हुने विद्यार्थी, शिक्षक र सरकारी विद्यालयमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ? कस्ता काम गरिरहेका छन् ? र त्यसको प्रतिफल कस्तो हुदैँ छ भनेर सबैभन्दा पहिला त अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनशक्ति र विद्यार्थीहरु कस्ता कस्ता छन् भनेर जानकारी पाउन सकिन्छ । बोर्डिङबाट उत्पादित जनशक्ति विदेश जान लालायित भए भने सरकारी विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नेपाल र खाँडीमूलुकमा काम लाग्ने खालका बने भन्ने कुरा आएको छ । विद्यालयका राम्रा कुराहरु संस्था र संस्थाका राम्रा कुराहरु समुदायमा पु¥याउनु पर्छ । कुनै एउटा विद्यालयले आफू राम्रो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसले आफू राम्रो भन्ने छाप वरपरका विद्यालयमा पार्न सक्नुपर्छ र राम्रो किसिमको सोच बनाउन सक्नुपर्छ ।
कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन । कुनै ठाउँमा विद्यार्थी छैनन् शिक्षक दरबन्दी छ कुनै ठाउँमा शिक्षक कम विद्यार्थी धेरै छन् । यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको दरबन्दी मिलान विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने र विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयमा शिक्षकहरु थप गर्ने निर्देशन तै तयार भएको छ । विद्यालय मर्च गर्ने, दरबन्दी मिलान कुनै गाउँ पालिकाले पहिले देखि नै गर्दै आएको रहेछ भने कुनै गाउँ पालिकामा दरबन्दीको व्यवस्था नै भएको छैन भने त्यसलाई राज्यले हेर्नु पर्छ । यसै कारण अहिले राष्ट्रिय रुपमा दरबन्दी मिलान गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिएको छ । यसका आधारमा कुन गाउँ पालिकाले कुन तहमा कति दरबन्दी गर्न पाउने भन्ने एउटा निष्कर्ष आउँछ ।
धादिङमा विद्यार्थी भर्ना अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? विद्यार्थीहरु विद्यालयसम्म आउने वातावरण यहाँहरुले कसरी बनाउनु भएको छ ?
विद्यार्थी भर्ना अभियान राष्ट्रव्यापी रुपमा यही बैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन भएको छ । विगत वर्षदेखि नै हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियान भनेर वैशाख महिनामा अगाडि लगिरहेका छौँ । अहिले राज्यले वैशाख २ गतेदेखि १५ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको हो । त्यस्तै वैशाख १६ गतेबाट वैशाख मशान्तसम्म विशेष भर्ना अभियान भनेर लागेका छौँ । यही भर्ना अभियानले देशमा करिब ९६ प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालयमा प्रवेश गरेका छन् भन्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क छ तर हामीले कठिनतम वर्गका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसलाई केवल भर्ना अभियानले समेट्न गाह्रो छ । यसको लागि पालिकालाई दायित्व दिइएको छ । कतिपय गाउँ पालिकाहरुले भर्ना अभियानलाई वृहत रुपमा गरेका छन् भने कुनै गाउँ पालिकाले सामान्य रुपमा हेरेका छन् ।
अन्त्यमा बजेट, स्रोत साधन सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरुको सहयोग समन्वय भयो भने हामी धादिङको शैक्षिक सुधारका लागि यो भन्दा पहिला जति काम गरियो त्यसमा अझै राम्रो गर्ने प्रयासका साथ नयाँ नयाँ कुरा तथा काम गर्न सक्ने छौँ ।